Mila mieritreritra ny gazety ... | Martech Zone
Talata, Septambra 5, 2006 Talata, Septambra 5, 2006 Douglas Karr
Avy amin'i Seth bilaogy anio momba an lahatsoratra ao amin'ny Editor sy Publisher momba ny fijerin'i Godin avy amin'i Kely no Vaovao lehibe ary ny fomba ampiharan'izy ireo amin'ny Indostrian'ny Gazety.
Ny ankamaroan'ny orinasa mitady handroso ny tenany dia hanao fandalinana SWOT mampitaha ny tenany amin'ny fifaninanana. Ny olana dia nanao asa lehibe ny media 'eo an-toerana' tamin'ny tsy firaharahiany ny Aterineto ho fandrahonana nandritra ny fotoana ela. Raha tsy tamin'ny fotoana nanoloran'ny Gazety Gazety ny fidiram-bola voasokajy ho an'ny lisitr'i Craig sy eBay dia hitan'izy ireo fa eto ity zavatra Interweb ity. Saingy mbola mila mamoritra ny hozatry ny faritra izy ireo ary manararaotra ny toerana misy azy ireo.
SWOT = (S) halavany, (W) eaknesses, (O) fahafaha-manao, (T)
Misy antony telo lehibe ananan'ny gazety iray amin'ny fifaninanana Internet: fandrakofana eo an-toerana, fizarana eo an-toerana ary loharanon-karena eo an-toerana. Mahita zavatra iraisana eo ve ianao? Eo an-toerana, eo an-toerana, eo an-toerana !!! Ireo dia lafin-javatra 3 tokony havadika ho tombony mifaninana amin'ny alina! Nandany folo taona mahery tao amin'ny indostrian'ny gazety nikiakiaka avy eo an-tampon'ny havokavoko aho fa mila mitrandraka ny herinay hitrandrahana ireo fahafaha-manao eo an-toerana. Tamin'ny sofina marenina io.
Ny olana lehibe dia ny indostrian'ny gazety dia indostrian'ny famonoana olona. Ireo mpitarika ao aminy dia avara-pianarana ao anatin'ny indostria ary mahalana no mamela ny indostria hanana talenta. Ny indostrian'ny Internet kosa dia nanangona talenta avy amina indostria maro - ao anatin'izany ny Gazety (moi).
Tsy azoko antoka fa ny lakileny dia ny tokony hieritreretan'ny gazety kely, mino tokoa aho fa tsy mila manararaotra ny fahasamihafana misy eo amin'ny maha-orinasa isam-paritra azy ireo. Ary koa, mieritreritra aho fa tonga ny fotoana ilana azy ireo manomboka mijery ivelan'ny rindriny efatra hisintomana talenta. Ireo olona efa teo nandritra ny androm-piainany dia tsy nanao tsara azy ireo.
Google Adsense ho an'ny karoka: Valim-pifandraisana tafiditra ao amin'ny WordPress
May 1, 2009 ao amin'ny 4: 31 PM
Hevitra iray tena tsara izany – misy fanamby foana ny fanovana!